tutorial: မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်ရရှိနိုင်သည့် Kindle application အတွက်စာအုပ်များကူးယူ။ eReaders အားလုံး
Villamandos | | Amazon Kindle, ကုမ္ပဏီများမှ, Kindle လဲ tutorial များ
ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများသည်များစွာသောအကြီးအခေါင်းကိုက်တစ်ခု မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ပစ္စည်းများအတွက် Kindle အက်ပ်များကိုရနိုင်သည် ဖတ်ရန်အတွက် eBooks ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည် ငါသည်ဤသင်ခန်းစာမှတဆင့်သင်တို့ကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေး ငါခေါင်းစဉ်ပြီ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်ရရှိနိုင်သော Kindle အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်စာအုပ်များကူးယူပါ။
ဤသင်ခန်းစာကို iPad အတွက် Kindle application နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်ခန်းစာတစ်လျှောက်လုံးသင်မြင်ရမည့်ပုံများကို iPad မှယူဆောင်သွားသည်၊ သို့သော်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြမည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်သည့်တက်ဘလက်နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွင်မဆိုအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် Amazon ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားပြီး eBooks အပိုင်းကိုသွားပါ ရာနဲ့ချီတဲ့စာအုပ်တွေကနေရွေးနိုင်တဲ့တချို့စာအုပ်တွေကအခမဲ့ဖြစ်ပြီးတချို့ကျတော့ပိုက်ဆံပေးရတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက် ၀ ယ်ယူလိုသောစာအုပ်ကိုရွေးပြီးသောအခါခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ရမည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုညယူရိုတန်ဖိုးရှိသော“ El Cuervo” ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ပြီးတာနဲ့စာအုပ်သူ့ဟာသူ၏စာမျက်နှာအတွင်းပိုင်း eBook ကိုဘယ်မှာပို့ချင်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဤစာအုပ်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည်မှာ Amazon ၌စာအုပ်၏တန်ဖိုးသည်သုညယူရိုသာရှိသည်။ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းအကြောင်းအမြဲတမ်းပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုစာအုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပါကသင်၏ကဒ်ပြားပေါ်တွင်မည်သည့်ငွေကိုမျှငွေသွင်းတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့်သင်မကြောက်သင့်ပါ။ သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်။
ကျွန်တော့်အမှု၌ကျွန်ုပ်သည် eBook သို့ပို့ရန်ပစ္စည်းနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်ပြောနေသည့် iPad နှင့် Kindle Fire HD တို့ရှိသည်။ ကိစ္စရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် device ကိုရွေးချယ်ပြီး option ကိုနှိပ်ပါ « 1 ခေါက်ဖြင့်ဝယ်ပါ».
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်အမျှ Amazon သည် ၀ ယ်ယူမှုကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပြီးပြီဟုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်။
ငါတို့တက်ဘလက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ Kindle လျှောက်လွှာကိုသွားလျှင် ကျနော်တို့ဖတ်နေဘို့ရှိပြီးသား eBook ကြည့်ရှုနိုင်သည်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - သင်ခန်းစာ - သတင်းစာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကို Kindle သို့စက္ကန့် ၃၀ အောက်နှင့်အခမဲ့ရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » သင်ခန်းစာ - မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်တက်ဘလက်များအတွက်ရရှိနိုင်သည့် Kindle အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်စာအုပ်များကိုကူးယူပါ
စက္ကူစာအုပ်တစ်အုပ်တွင် eReader တစ်ခုဝယ်ရန်အကြောင်းပြချက် ၉ ချက်